Naqshadeynta SQL Server & MS Helitaanka Marijuana iyo Ganacsiga Hemp
Qasaarooyinka - Horumarinta Macaamiisha
Haddii aadan si sax ah u baarin mashruuca horumarinta, MA heli kartid waxaad u baahan tahay.
Haddii aad leedahay koodh lahaansho ay soo saartay hal horumariya (oo isagu / iyadu ma keenin dukumiinti), wax ka beddelka koodhka jira wuu adkaan karaa.
Way fududahay in la isticmaalo… Waxaan la kulmay codsiyo badan oo "jabay" oo ay dhisteen dadka isticmaala korontada iyo kuwa kale… waxay gaareen heer xirfadahooda (ama waqtiga ay wax ku baranayaan) aysan ku filnayn howsha,
Xalka Database Cloud
Xalalka daruuriga ah ayaa noqda kuwo caan ah, maadaama ay u oggolaadaan dadka isticmaala inay ku maareeyaan xogtooda internetka, iyagoo adeegsanaya aalado badan, iyagoon u baahnayn adeegyo, iwm ganacsigooda maxalliga ah. Inta badan xalalkani waxay u baahan yihiin habeyn iyo barnaamijyo qaar, si kastaba ha noqotee.
Xalka Horumarinta Macluumaadka Macluumaadka
In kasta oo Access iyo Excel labadaba la habeyn karo, ganacsiyada yar-yar ee badan ayaa dooran doona inay la socdaan xalka kaydinta xogta, sababo la xiriira baahidooda xogta iyo sida ay ugu baahan yihiin inay u maareeyaan, u falanqeeyaan una faafiyaan macluumaadka. Xalalka gaarka ahi waxay u oggolaanayaan ganacsatadu inay doortaan barnaamijkooda (websaydhka, desktop-ka, moobiilka, dhammaantood) iyo keydka macluumaadkaSQL Server, MySQL, iwm)
Faa'iidooyinka - Maxaa Loo Isticmaalaa MS Access
Degdeg si aad u horumariso foomamka, warbixinnada iyo weydiimaha.
Microsoft waxaa kujiray saaxirro badan oo hagaya abuuritaanka foomamka iyo warbixinnada.
Qoraa warbixin aad u wanaagsan.
Faa'iidooyinka - Horumarinta Macaamiisha
Waxaad si sax ah u heshaa waxaad rabto. Waxaad ku maamuli kartaa xalka aalado badan iyo teknoolojiyad, oo ku saleysan qeexitaankaaga. Waxaad leedahay lammaane dibadeed (DBAs iyo Programmers) oo kula shaqeynaya si loo hubiyo in wax waliba shaqeynayaan ... taasi waa takhasuskooda.
Waxaan marar badan la kulmay dadyow isticmaalaya MS Excel maaraynta xogta, iyo inta ay u shaqeyn karto liisaska yaryar, iwm, guud ahaan kuma habboona in la ilaaliyo xogta.
Faa'iidooyinka - Maxaa Loo Isticmaalaa MS Excel
Waa la heli karaa.
Si fudud loo dejiyo loona isticmaalo.
Falanqaynta waxaa lagu dhisay Excel.
Si fudud loo kaydiyo loona qaybiyo.
Qasaarooyinka - Waa maxay sababta aan loo Isticmaalin MS Excel
Awoodaha adeegsadayaal badan ayaa xaddidan (haa, waad QAADAN kartaa dhowr qof oo hal fayl galaya isla markiiba, laakiin tan guud ahaan ma ahan fikrad wanaagsan in la qoro arrimaha qufulka).
Way adkaan kartaa in la dejiyo foomamka gelitaanka xogta ee adag adigoon aqoon fiican u lahayn VBA (Visual Basic for Applications). Kaydinta Xogtu kama duwana koodhka iyo falanqaynta.
Kuma habooneen u adeegida xogta Bogagga (marka loo isticmaalo keyd ahaan xog ahaan, maahan kaliya isku xirka soo dejinta).